2,000 ireo bilaogera gaming Technorati? Waaaaah! | Martech Zone
2,000 ireo bilaogera gaming Technorati? Waaaaah!
Alarobia, Febroary 7, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny bilaogiko dia niditra an-tsoratra tao anatin'ny fotoana fohy Z-List. Lisitra mahafinaritra an'ireo bilaogera kely tsy fantatra fantatra izay niasa mafy tamin'ny asan'izy ireo ary nanan-kery teo amin'ny tontolon'ny bilaogy sy ny tranonkala. Navoaka tamin'ny bilaogy an-jatony ny lisitra, nisy fiatraikany tamin'ny laharanay tao amin'ny Technorati sy teo amin'ny toeran'ny Search Engine. Amin'ny tampony, ny bilaogy A-lister Seth Godin na dia nandany fotoana niresaka momba izany aza.
Fanandramana vaovao no natomboka tamin'ny volavolan'ireo bilaogera 2000… ny endrik'ireo bilaogy manerana an'izao tontolo izao. Izaho koa no nanao an'io! Ireo fotoana roa ireo dia tao anaty lisitra aho ary tsy nangataka izany. Tamin'ny andrana mpamaham-bolongana 2000 dia nilatsaka an-tsitrapo aho, saingy raha ny marina dia rehefa avy napetraka tsy nisy fahalalana aho. Nijanona tsy nandefa ny 2,000 tao amin'ny tranokalaniko aho na izany aza… sary be dia be no haseho!
Ankehitriny ireo bilaogera hafa dia mikiakiaka maloto amin'izany. Miantsoantso hanao ankivy ny Technorati mihitsy aza ireo tranonkala.
Bilaogy 55,000,000 eto amin'izao tontolo izao ary na aiza na aiza ireo bilaogy 2000 ireo dia 'manetsiketsika izao rehetra izao'. Avelao aho. Tsy misy maha samy hafa azy mihitsy ny fizarana ny blogroll anao, ny fifanakalozana rohy amin'olon-kafa, ny fanomezana ny varotrao noho ny fiantsoana ny bilaoginao, ny linkbaiting, ny bokotra "Ataovy ho Favorite Technorati ahy", "optimise" ho an'ny motera fikarohana, Digging,…. na Mividy ny laharana Technorati anao amin'ny alàlan'ny fanaovana doka amin'ny tranokala hafa. John Chow, ohatra, manohy mampiasa ny fomba rehetra sy ny fomba rehetra hanomezana lanja ny laharany.
Miahy ve aho? TSIA tanteraka!
Izany no zava-misy ry vahoaka… tsy misy hafa. Mandoa ny manao doka, vanim-potoana. Izany dia nilaza fa ny dokam-barotra dia mety hahazo anao manana laharana, fitaomana, fahefana ary fametrahana ny motera fikarohana… saingy tsy hitazona azy ireo izany. Mba hitazomana ny laharanao, ny fitaomam-pahefana, ny fahefana ary ny fametrahana ny motera fikarohana dia mila miasa amin'ny atiny ianao. Raha tsy izany dia ho varavaran'ny mpitsidika ny tranokalanao ary hidina ao anaty fantsona ny laharanao.
Rehefa mandeha ny fotoana, hitotongana ny laharana mitombo. Rehefa mandeha ny fotoana, hiakatra an-tampony ireo bilaogy tsara. Hisy foana ny olona manidina eo alohanao izay tsy mendrika izany ary ny olona izay alehanao lasa izay tena manao izany. Nanampy ny tohatra tohatra i John Chow ary avy eo manome ny mpamaky azy atiny kalitao mba hijanonany eo.
Tadidiko kelikely taloha Scoble nanonona ny fomba nanimban'ny tranokala sosialy ny fifamoivoizan'ny bilaoginy. Nipetraka manodidina ve izy ary nangataka boikotsa an'i Digg? Tsia! Nanangana hetsika vaovao izy izay mahazo vahana ary mampiharihary tena amin'ny mpanatrika vaovao.
Tsy akanin-jaza ity, miala amin'ny tomany ary miverena amin'ny lalao. Ry lehilahy!
Ity misy lisitr'ireo lahatsoratra bilaogy momba ilay lisitra… Ataoko anaty lisitra mahafinaritra izy ireo hahafahanao mametraka azy ireo ao amin'ny lahatsoranao raha manapa-kevitra ny hanome hevitra momba ny lisitr'ireo bilaogera 2,000 ianao. Angamba afaka manomboka ny 2,000 miresaka lisitra 2,000.
Blog an'i Zoli
Strategiste amin'ny tranonkala
Mampihomehy, ireo bilaogera miresaka momba ilay andrana mpamaham-bolongana 2,000 ireo dia mampiakatra ny laharany ankehitriny ao Technorati. Angamba raha manasazy ny olona rehetra ao anaty lisitra isika, dia tokony hosazintsika ihany koa ny olona rehetra izay mitoraka bilaogy momba ilay lisitra, eh ?!
Iza ianao hilaza amiko fa tsy mendrika ny laharana ananako? Mino marina aho fa ny atiny sy ny fampahalalana izay entiko ny mpamakiako dia manana kalitao faran'izay tsara ary mendrika mihoatra ny maro amin'ireo bilaogy Top 100 Technorati any. Tsy an'ny Technorati no manapa-kevitra. Tsy anjaranao ny manapa-kevitra. Ho an'ireo olona izay manohy miverina mamaky ny bilaogiko no manapa-kevitra. Ireo no olona tompoiko.
Tags: ny mpamaham-bolonganalalaoTechnorati
Fanehoan-kevitra Avelao hamaky ny bilaoginao ireo mpitsidika
Anatomy amin'ny loza voajanahary
7 Mey 2007 tamin'ny 11:53 hariva
ankivy ny Technorati!
8 Feb 2007 tamin'ny 7:33 maraina
Tena mpankafy Technorati aho ary sarotra amiko ny misoroka an'io. Manantena fotsiny aho fa fantatr'izy ireo fa rehefa manandrana 'tweak' demokrasia ianao dia tsy demokrasia intsony.
8 Feb 2007 tamin'ny 1:47 maraina
Izay mifehy ny algorithma dia mandresy!
Hoy i Douglas ary tongasoa eto amin'ny Bloke's Network misy mpamaham-bolongana mahazatra.
8 Feb 2007 tamin'ny 7:32 maraina
Tsara izany, BB! Ary misaotra !!!
8 Mey 2007 tamin'ny 4:10 hariva
Hey Doug. Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny zavatra nolazainao aho. Raha mamaky ny lahatsoratro ianao (izay vitanao), dia ho hitanao fa tena manontany tena momba ilay rafitra laharana Technorati manontolo aho. Tsia raha marina na diso. Fa inona no dikan'ilay hoe heck.
Ary btw, miombon-kevitra tanteraka amin'ny andalana farany nataonao aho momba izay manapa-kevitra ny amin'ny maha-zava-dehibe ny bilaogiko. Ry mpamaky ry mpamaky!
8 Mey 2007 tamin'ny 7:37 hariva
Misaotra Dawud! Tsy voatery hiombon-kevitra amin'ny rafitra laharana Technorati aho… Heveriko fotsiny fa raha manapa-kevitra ny hampiroborobo ireo bilaogera hafa ireo bilaogera… mandeha tokoa ilay laharana fa tsy 'gamed'. Fomba tsara hampiroboroboana bilaogy izay raha tsy izany dia tsy asandratra.
Ny fanandramana hafa amin'ny laharana izay tsara indrindra dia ny Todd And's Power 150. I Todd dia manandrana mandanja ny maotera tsirairay avy ary manome isa mifanaraka amin'izany.
8 Mey 2007 tamin'ny 4:25 hariva
Tsy miombon-kevitra amin'ny zava-misy aho fa tsy ao anatin'ny lisitry ny 2000. Azo antoka, fiakaran'ny vidim-piainana artifisialy izany, saingy tsy maninona aho amin'izany. Hanjavona ny vokany, ary ho betsaka ny mpamaky sisa tavela amiko noho ny natomboko. Nanomboka bilaogy aho talohan'izay, ary tsy tiako ilay fiakarana miafina. Tsy azoko antoka hoe tena nandao azy io aho, saingy nahavita fiakarana be.
8 Mey 2007 tamin'ny 7:34 hariva
Tena teboka tena tsara izany Douglas ary manaiky 100% aho. “Ny fiakarana an-tsokosoko”… andalana lehibe. Ireo bilaogera ao anaty lisitra dia tia mifampiresaka satria fantatr'izy ireo fa manampy ny laharan'izy ireo sy ny fiparitahany izany, koa ahoana no ahatongavan'ilay 'zazalahy kely' eo? Memes sy lisitra toa itony no fitaovana tonga lafatra ahafahana mivoaka.
Misaotra naneho hevitra ary nijanona kely!
8 Mey 2007 tamin'ny 6:06 hariva
Ny lahatsoratro momba io lohahevitra io:
Ao amin'ny fiarovana ny bilaogera 2000
10 Mey 2007 tamin'ny 2:32 hariva
Ha. Tsara izany. Ny mampihomehy azy rehetra. Mahamenatra.
13 Mey 2007 tamin'ny 9:49 hariva
Ity no iray amin'ireo lahatsoratra tsara indrindra novakiako momba ny Tetikasa bilaogera 2000. Misaotra anao.
Miaina ao amin'ny http://www.2kbloggers.com teny an-dalana 🙂 nesoriko ny 300 voalohany satria tsy nangataka ny ho anisan'izy ireo izy ireo. Tao anatin'io vondrona io ianao. Te hiverina ve ianao?
13 Mey 2007 tamin'ny 9:52 hariva
Marina tokoa, Elaine! Tiako ilay tetikasa. Tiako ihany koa i Technorati ary somary variana amin'ny fanehoan-kevitra hitako tamin'ilay tetikasa aho.
Mar 3, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitrao ary nandao!